हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मुटु छैन : काँग्रेसका नेता गगन थापा - bampijhyala.com
Home > समाचार > हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मुटु छैन : काँग्रेसका नेता गगन थापा
३० आश्विन २०७७, शुक्रबार २३:४६ bampijhyala
३० असाेज, बाँपीझ्याला, काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मुटु नै नभएकाे बताउनु भएकाे छ ।
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर १३ दिनदेखि घरमै आइसोलेसनमा बसिरहनु भएका नेता थापाले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक भिडियाे सार्वजनिक गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीसँग मुटु नभएकाे बताउनुभएकाे हाे ।
कोरोनाका कारण सबैक्षेत्र प्रभावित हुँदा पनि कुनै पनि कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई नछाेएकाे भन्दै उहाँले भन्नुभएकाे छ- ‘अब हामीले भन्नु नै पर्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मुटु छैन ।
हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मन छैन । प्रधानमन्त्रीसँग मुटु नै रहेनछ । यतिका कुरा हुँदै गर्दा दुख्दा पनि नदुख्ने, पोल्दा पनि नपोल्ने । छुँदा पनि नछुने । भनेपछि प्रधानमन्त्रीसँग मुटु छैन ।’
काेराेना कहरले जनतालाई पोलेको कुरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रथामिकता नदिएकाे सांसद थापाले बताउनुभयाे । ‘प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता प्रचण्डसँगको भेटघाटमा छ । पार्टीभित्रको झगडा, लुम्बिनी प्रदेश राजधानीमा आफ्नै दलका दुई नेता मिलाउने प्राथमिकता छ ।
प्रधानमन्त्रीको अहिलेको प्राथमिकता कर्णालीको झगडा मिलाउने छ । त्यसपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले एकथरि नेताहरु रिसाउने भएपछि फकाउने र ढाल्नेभन्दा अरू ध्यान छैन,’ उहाँले भन्नुभएकाे छ ।
सांसद थापाले आफूलाई ९ औं / १० औं दिनमा ज्वरो खोकीलगायतका काेराेनाका लक्षणसमेत देखिएकाे जानकारी दिनुभएकाे छ । कोरोनाको अर्को परीक्षण कुरिरहेको र केही दिनमै संक्रमणबाट मुक्त आशा पनि व्यक्त गर्नुभएकाे छ ।
उहाँले भन्नुभएकाे छ- ‘मसहित बुबा, आमा, श्रीमती, छोरीलगायत नौं जना घरमा आइसोलसेनमा छौँ । शुभेच्छा र आशीर्वादले गर्दा अहिलेसम्म कसैलाई गाह्रो भएको छैन । आशा छ, केही दिनभित्रै हामी संक्रमणबाट मुक्त हुनेछौँ ।’
काेराेनाका कारणले सर्वसाधरण कंगाल बनेर सडकमा आइपुग्दासमेत प्रधानमन्त्री ध्यान नदिएकाे उहाँकाे गुनासाे छ । ‘कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएका छन् ।
त्यहाँभित्र पनि नन-कोभिड । संक्रमण नभएको तर अन्य रोगको उपचार नपाएर अस्तव्यस्त भएको छ ।
अर्कोतिर, आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ। हजारौं मान्छेहरु बेरोजगार भएका छन् ,’ उहाँले भिडियाेमर्फत भन्नुभएकाे छ, ‘स्वरोजगार भएका व्यक्तिको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ ।
कंगाल बनेका छन्,सडकमा आइपुगेका छन् । यस्तो बेलामा यी कुनै पनि कुरामा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिएको पाइएन ।’
सांसद थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय बेताल भएकाे बताउनुभएकाे छ । सर्वसाधरण उपचारका लागि काठमाडौं आउदा पनि उपचार नपाएकाे उहाँले बताउनुभएकाे छ । ‘स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बेताल छ ।
सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय भएकाे छ,’ उहाँले भन्नुभएकाे छ, ‘गरिब गुरुवा उपचारका लागि काठमाडौं उपचार गर्न आउँछन्,उनीहरु कहाँ गएर उपचार गर्ने ? उनीहरुले उपचार कहाँ गर्ने ?’
सांसद थापाले काठमाडौं उपत्यकाभित्रकाे मेडिकल कलेजहरुमा कोभिड अस्पताल बनाउन सकिने बताउनु भएकाे छ । ‘नेपाल मेडिकल, किस्ट मेडिकल कलेज छन् ।
मेडिकल कलेजहरुलाई लिन सकिन्छ। तिनिहरुमा सयौं बेड छन् । २५ सयदेखि तीन हजार बेड क्षमताको कोभिड अस्पताल बनाउन सकिन्छ ।
एउटा रोष्टर बनाएर गर्‍यो भने त्यहाँभित्र क्रिटीकल केसहरु हेर्न पनि सकिन्छ। त्योभन्दा बाहिर गर्ने कार्य काठमाडौंमा १५ हजार क्षमतासम्मको आइसोलेसन बनाउन सकिन्छ, सार्वजनिक भिडियाेमा उहाँले बताउनु भएकाे छ ।
काेराेनाविरूद्ध स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय गरेर प्रभावकारी प्रणाली बनाउन सकिने सुझाव पनि दिनुभएकाे छ । ‘समय त धेरै घर्किएको छ । तर, गर्न सकिने समय अहिले पनि छ । स्रोत र साधन हामीसँग छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय गरेर प्रभावकारी प्रणाली बनाउ सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभएकाे छ, ‘ सबै नागरिक यो बेला सरकारलाई मद्धत गर्न चाहिरहेका छन् । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कदम असफल होस् भन्ने को चाहन्छ ? हामी सबै मान्छे हौं नि ।
सरकारको सफलतासँग प्रत्येका परिवार जोडिएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहले हेरिए पनि यो बेला कोभिड नियन्त्रणमा सरकार सफल होस् नै भन्ने सबैको चाहना हुन्छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले स्थगित गर्‍यो अत्यावश्यक बाहेकका सेवा
चीनमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिअन्ट फैलिन थालेपछि बढ्दो चिन्ता ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार २३:४६
२ हजार २७९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि, २३ जनाको मृत्यु ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार २३:४६
आज दोलखामा थप ३८ जनामा कोरोना पुष्टि, १८ संक्रमण मुक्त, ९ दिनमा २१० जना संक्रमण बृद्धि ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार २३:४६
अमेरिकाले आफ्नो फौज फिर्ता लिन गरेको आकस्मिक निर्णय देशको खस्कँदो सुरक्षास्थितिको प्रमुख कारक हो : अफगानिस्तान राष्ट्रपति घानी ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार २३:४६
प्रमोद खरेलको ‘बैगुनी’मा आस्था र दीपक (भिडियोसहित) ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार २३:४६